Joshua anoisa vanhu kuti vahwandire guta reAi (1-13)
Guta reAi rinokundwa (14-29)
Mutemo unoverengwa paGomo reEbhari (30-35)
8 Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Usatya kana kuvhunduka.+ Tora varume vese vehondo, muende kunorwisa Ai. Ona, ndaisa mambo weAi, nevanhu vake, neguta rake, nenyika yake, mumaoko ako.+ 2 Itira guta reAi namambo waro sezvawakaitira guta reJeriko namambo waro,+ asi munogona kupamba zvinhu zvemuguta iroro nezvipfuwo kuti zvive zvenyu. Ita kuti pave nevanhu vanohwandira guta kuseri kwaro.” 3 Saka Joshua nevarume vese vehondo vakaenda kunorwisa Ai. Joshua akasarudza varwi vane simba 30 000 akaita kuti vaende usiku. 4 Akavarayira achiti: “Onai, munofanira kuhwandira guta racho muri seri kwaro. Musanyanya kuenda kure neguta racho, uye mese zvenyu garai makagadzirira. 5 Ini nevanhu vese vandiinavo tichaenda kuguta racho, uye kana vakabuda kuti vatirwise sezvavakamboita,+ tichabva tavatiza. 6 Pavachabuda vachitidzingirira, tichaita kuti vaende kure neguta racho, nekuti vachati, ‘Vari kutitiza sezvavakamboita.’+ Uye isu tichavatiza. 7 Ibvai masimuka pamunenge makavahwandira, motora guta racho; Jehovha Mwari wenyu achariisa mumaoko enyu. 8 Pamunenge mangotora guta racho, ripisei nemoto.+ Munofanira kuita zvakataurwa naJehovha. Onai, ndakuudzai zvamunofanira kuita.” 9 Joshua akabva avati vaende, ivo ndokuenda kunzvimbo yavaifanira kunohwanda; vakaramba vari pakati peBheteri neAi, kumavirira kweAi, asi Joshua akarara kwaiva nevanhu usiku ihwohwo. 10 Pashure pekunge Joshua amuka mangwanani-ngwanani uye aunganidza uto, iye nevakuru vaIsraeri vakatungamirira uto racho kuenda kuAi. 11 Varume vese vehondo+ vaaiva navo vakaenda nechepamberi peguta racho. Vakadzika musasa kuchamhembe kweAi, pakati pavo neAi paine bani. 12 Munguva iyi, akanga atora varume vanenge 5 000 akaita kuti vahwandire+ pakati peBheteri+ neAi, kumavirira kweguta racho. 13 Saka vanhu vakadzika musasa mukuru kuchamhembe kweguta racho,+ kumavirira kuine vaya vakanga vakahwandira guta racho,+ uye Joshua akaenda pakati pebani usiku ihwohwo. 14 Mambo weAi paakangozviona, akabva akurumidza kuenda mangwanani-ngwanani nevarume veguta racho kuti vanorwisana nevaIsraeri pane imwe nzvimbo yakatarisana negwenga. Asi haana kuziva kuti paiva nevakanga vakamuhwandira kuseri kweguta racho. 15 Varume veAi pavakatanga kurwisa, Joshua nevaIsraeri vese vakatiza nenzira yainanga kurenje.+ 16 Vanhu vese vaiva muguta racho vakabva vanzi vavadzingirire; uye pavaidzingirira Joshua, vaitoenda kure neguta. 17 Pavarume vese vemuAi neBheteri hapana asina kuenda kunodzingirira vaIsraeri. Vakasiya guta rakashama, vakatevera vaIsraeri. 18 Jehovha akabva ati kuna Joshua: “Tambanudzira pfumo* riri muruoko rwako kuAi,+ nekuti ndichakupa guta racho.”+ Saka Joshua akatambanudzira pfumo raiva muruoko rwake kuguta racho. 19 Paakangotambanudza ruoko rwake, varume vakanga vakahwandira vakakurumidza kusimuka pavakanga vari, vakamhanyira muguta, vakaritora. Vakabva vangopisa guta racho nemoto.+ 20 Varume veAi pavakacheuka, vakaona utsi hweguta racho huchipwititika mudenga, uye vakapera simba, vakashaya kwekutizira. Vanhu vaya vakanga vachitizira kurenje vakabva vatendeukira vanhu vaivatevera. 21 Joshua nevaIsraeri vese pavakaona kuti vaya vakanga vakahwandira vainge vatora guta, uye pavakaona utsi hweguta huchipwititika, vakatendeuka ndokurwisa varume veAi. 22 Vamwe vavo vakabva vabuda muguta kuti vanosangana navo, zvekuti varume veAi vakanga vavharirwa pakati, vamwe vaIsraeri vari kuno vamwe uko, uye vakavauraya zvekuti hapana akapona kana akatiza.+ 23 Asi vakabata mambo weAi+ ari mupenyu vakamuunza kuna Joshua. 24 VaIsraeri pavakapedza kuuraya vanhu vese vemuAi murenje mavakanga vavatevera, vavauraya vese nebakatwa, vaIsraeri vese vakabva vadzokera kuAi, vakaiparadza nebakatwa. 25 Vanhu vese vakaurayiwa zuva iroro kubvira kumurume kusvikira kumukadzi vakasvika 12 000, vanhu vese veAi. 26 Joshua haana kudzosa ruoko rwake rwaakanga atambanudza narwo pfumo+ kusvikira aparadza vagari vese vemuAi.+ 27 Zvisinei, vaIsraeri vakatora zvipfuwo nezvinhu zvemuguta iroro kuti zvive zvavo, sezvakanga zvataurwa naJehovha kuna Joshua.+ 28 Joshua akabva apisa guta reAi, akariita dongo nekusingagumi,+ sezvarichiri nanhasi. 29 Akaturika mambo weAi padanda* kusvikira manheru, uye zuva parakanga rava kudoka Joshua akarayira kuti vaburutse chitunha chake padanda.+ Vakabva vachikanda pagedhi reguta racho, vakatutira murwi wematombo pamusoro pake, uyo uchiripo nanhasi. 30 Panguva iyoyo Joshua ndipo paakavakira Jehovha Mwari waIsraeri atari, paGomo reEbhari,+ 31 sezvakanga zvarayirwa vaIsraeri naMozisi muranda waJehovha, uye sekunyorwa kwazvakaitwa mubhuku reMutemo+ waMozisi kuti: “Atari yematombo asina kuvezwa, asina kumboshandisirwa mudziyo wesimbi.”+ Vakapa Jehovha zvibayiro zvinopiswa pairi nezvibayiro zverugare.+ 32 Akabva anyora pamatombo ipapo Mutemo+ wakanga wanyorwa naMozisi pamberi pevaIsraeri.+ 33 VaIsraeri vese, nevakuru vavo, nevatungamiriri, nevatongi vavo vakanga vakamira kumativi maviri eAreka pamberi pevapristi vedzinza raRevhi, avo vakanga vakatakura areka yesungano yaJehovha. Paiva nevatorwa nevaIsraeri.+ Hafu yavo yakamira pamberi peGomo reGerizimu, uye imwe hafu yakamira pamberi peGomo reEbhari+ (sezvakanga zvarayirwa naMozisi muranda waJehovha),+ kuti vaIsraeri vakomborerwe. 34 Pashure peizvi akaverenga mashoko ese eMutemo zvinonzwika,+ makomborero+ nekutukwa,+ maererano nezvese zvakanyorwa mubhuku reMutemo. 35 Hapana shoko pane ese akanga arayirwa naMozisi risina kuverengwa zvinonzwika naJoshua pamberi peungano yese yaIsraeri,+ kusanganisira vakadzi nevana nevatorwa+ vaigara* pakati pavo.+
^ Kana kuti “pfumo diki.”
^ ChiHeb., “vaifamba.”